Indlela yeLottery | I-Ota Ward Cultural Promotion Association
Ngokombono wokuvimbela ukutheleleka, ilotho labafakizicelo abaningi abazobuthana endaweni eyodwa kuze kube uMashi XNUMX unyaka weReiwa lizoguqulwa libe yindlela yamanje yelotto esuselwa ekusetshenzisweni kweposi kanye nelotho ngabasebenzi benhlangano.
I-lottery ingeyabasebenzi benhlanganoI-lottery ezenzakalelayo isebenzisa ikhompyuthaNgemuva kwalokho, landela inqubo engezansi.
Ifomu lesicelo elithunyelwa ngeposi lizobalwa ngokulandelana kosuku olutholwe ngabasebenzi besikhungo ngasinye.Uma amafomu ezicelo amaningi efika ngosuku olufanayo, azobalwa ngokungafanele.
Ngesikhathi selotho, inani lezicelo lizobhaliswa kukhompyutha egumbini ngalinye bese kwenziwa ilotho ezenzakalelayo.
Uma usuku olufunwayo kwifomu lesicelo olufana nenombolo ekhethwe yikhompyutha lutholakala, uzowina, futhi uma lungatholakali, uzokwaliwa.
Gcwalisa izinto ezidingekayo "kwifomu lesicelo selotho" lesakhiwo ngasinye bese ulithumela (Kumele ifike ngomhlaka 10/1Noma kwikhawunta (9: 00-19: 00).
* Izicelo zefeksi ngeke zamukelwe ngenxa yengozi yokudluliswa okuyiphutha.
* Sicela ufake isicelo esikhungweni osisebenzisayo.
* I-Ota Ward Hall Aplico izovalwa kusukela ngoJanuwari 2022 (Reiwa 4) kuya kuFebhuwari 1 (Reiwa 2023) ngenxa yomsebenzi wokwakha njengokumelana nokuzamazama komhlaba kophahla.
Lapho isicelo sokusetshenziswa sizoqala kabusha ngoMashi 2023 (Reiwa 5) ngemuva kokuvalwa kwemnyuziyamu,LaphaSicela uhlole kusuka ku-.
Ifomu lesicelo seLottery
Ifomu lesicelo (kumele lifike ngomhlaka 10/1)
Ukuze "ukhokhise ilotho yendawo" 〒144-0052
5-37-3 Kamata, Ota-ku, eTokyo
Ukuze "ukhokhise ilotho yendawo" 〒143-0024
2-10-1, Ephakathi, Ota-ku, Tokyo
Ukuze "ukhokhise ilotho yendawo"
Uhlelo lokusebenza lwe-lottery lukhawulelwe kukhetho lwesithathu.
Umuntu oyedwa kuphela ongafaka isicelo somcimbi owodwa (ofanayo kumicimbi ebanjelwe ngokuhlanganyela ngamaqembu amaningi).Uma ufaka isicelo sabantu abangaphezu koyedwa, imiphumela ye-lottery nohlelo lokusebenza kuzoba okungavumelekile.
Awukwazi ukufaka isicelo sezinsuku nezigaba i-Ota Ward, i-Ota Ward Cultural Promotion Association, kanye ne-Ota Bunkanomori Management Council abahlela ukuyisebenzisa.Sicela uhlole itafula lokutholakala lenyanga ehlanganiswe ilotho engezansi ngaphambi kokufaka isicelo.
Igama lomhleli / lenhlangano, igama lomcimbi, nokuqukethwe akukwazi ukuguqulwa ngemuva kokufaka isicelo.
Uma usebenzisa umcimbi omkhulu (izigubhu zaseJapan, ukushaywa ngomculo, izinsimbi zethusi, njll.), Kungenzeka ungakwazi ukufaka isicelo ngokuya ngegumbi, ngakho-ke sicela uxhumane nathi kusengaphambili.
Isaziso semiphumela yelotho
Akunandaba ukuthi uthini umphumela, imiphumela yelotho izothunyelwa ngekheli lalowo ofaka isicelo ngosuku lwelotho.
Uma uphumelela, sicela ukhokhe efasiteleni lesikhungo sokufaka isicelo ngesikhathi esinqunyiwe sokukhokha.
* Uma ufisa ukudlulisa imali, sicela uxhumane nesikhungo ngasinye ngosuku olwandulela umnqamulajuqu wokukhokha.
* Uma kungakhokhiwe ngosuku olubekiwe, luzokhanselwa.Siyabonga ngokuqonda kwakho kusengaphambili.
Ithagethi yelotho ngoMashi (kusukela ngoFebhuwari 10, unyaka wesithathu weReiwa)
Inyanga okubhekiswe kuyo iLottery
OkweMashi 2022 (Reiwa 4)
NgoLwesithathu, Mashi 3, unyaka wesithathu kaReiwa
NgoLwesihlanu, Mashi 3, unyaka wesithathu kaReiwa Ephreli 3, unyaka wesithathu kaReiwa (ngoLwesibili)
Ilotho yekhompyutha NgoLwesithathu, Mashi 3, unyaka wesithathu kaReiwa
Kuze kube ngu-XNUMX ntambama
* Uma ufisa ukusebenzisa igumbi lombukiso (ukusetshenziswa kombukiso) ngokwehlukile, sicela ubheke ekhasini lokubuka konke / lezinsiza zegumbi lombukiso.
Uhlaka / indawo yokusebenza yegumbi lombukiso
* Ihholo elikhulu, ihholo elincane, igumbi lokubukisa, nezitudiyo u-A no-B kuzovalwa kusukela ngoJanuwari 2022 (Reiwa 4) kuya kuFebhuwari 1 (Reiwa 2023) ngenxa yomsebenzi wokwakha njengokumelana nokuzamazama komhlaba kophahla. ..
* Okwalabo abafisa ukudlulisa imali
Ephreli 3, unyaka wesithathu kaReiwa (ngoLwesibili)
Kuze kube ngu-3 ntambama
Isheduli yomlilo wesikhuni
Ukumenyezelwa nokwamukelwa kwezikhungo ezingenamuntu zesicelo sikaMashi
Imininingwane engenamuntu ngemuva kwe-lottery yesicelo sikaMashi izothunyelwa kuwebhusayithi yethu.
Ngemininingwane yakamuva selokhu kwaqala ukwamukelwa kwezindawo ezingenamuntu, sicela ubheke i-Uguisu Net.
Usuku lokushicilelwa kolwazi lokutholakala
Ngemuva koLwesine, Okthoba 3, unyaka wesithathu kaReiwa Akufaneleki Ngemuva koLwesine, Okthoba 3, unyaka wesithathu kaReiwa
Ukwamukelwa kwezindawo ezingenamuntu
NgoMgqibelo, Mashi 3, unyaka wesithathu kaReiwa
Kusukela ngo-XNUMX ekuseni
* Ukwamukelwa kwezindawo ezingenamuntu kwenzeka kuqala, kusizakala kuqala.
* Ukukhanselwa ngeke kusabiwa kabusha.
Umgomo welotho kaFebhuwari
OkweMashi 2022 (Reiwa 4) Meyi 3, unyaka we-8 weReiwa (iLanga)
NgoLwesithathu, Mashi 3, unyaka wesithathu kaReiwa Reiwa Mashi 3 (ILanga)
Ilotho yekhompyutha NgoFebhuwari 3, unyaka wesithathu kaReiwa (ngoMsombuluko)
Septhemba 3, unyaka wesithathu kaReiwa (ngoMsombuluko / ngeholide)
NgoLwesithathu, Mashi 3, unyaka wesithathu kaReiwa Meyi 3, unyaka we-9 weReiwa (iLanga)
NgoFebhuwari 3, unyaka wesithathu kaReiwa (ngoMsombuluko)
NgoLwesihlanu, Mashi 3, unyaka wesithathu kaReiwa
OkweMashi 2021 (Reiwa 3)
Ngemuva koLwesibili, Septhemba 3, unyaka wesithathu kaReiwa Akufaneleki Ngemuva koLwesibili, Septhemba 3, unyaka wesithathu kaReiwa
Septhemba 3, unyaka wesithathu kaReiwa (ngoLwesine / ngeholide)
Kusukela ngo-XNUMX ekuseni Akufaneleki Septhemba 3, unyaka wesithathu kaReiwa (ngoLwesine / ngeholide)
Sicela ubheke i-Uguisu Net ukuthola imininingwane yakamuva.